Kuziva Brussels nebhasikoro naOlivia Borlée, Michaël R. Roskam naNick Ramoudt
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Kuziva Brussels nebhasikoro naOlivia Borlée, Michaël R. Roskam naNick Ramoudt
Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Sports • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Mumazuva mashoma 'nguva, Brussels ichatamba inomirira Grand Départ ye2019 Tour de France. Zviri kupesana neiyi festive kumashure uko kushanya. Brussels yakoka vagari vatatu vanozivikanwa veguta kuti vatiperekedze nebhazikoro munzvimbo dzavanofarira: Olivia Borlée, Michaël R. Roskam naNick Ramoudt vese vari kutora chikamu.
Pane mazuva mashoma ekuti Brussels iendese Grand Départ yeTour de France. Guta reEuropean riri muchikamu chekupedzisira chegadziriro. Brussels iri kupembererawo makore makumi mashanu ekukunda kwaEddy Merckx kwekutanga kweTour de France kukunda, saka inguva yakasarudzika yeguta kubhadhara mutero kubhasikoro pamwe nehunhu hwayo hwetsika.
Dunhu reBrussels-Capital rakaona huwandu hwevanofamba mabhasikoro zvakapetwa kaviri mumakore mashanu apfuura. Brussels yachinja pamusoro pemakore uye yakapa yakawanda uye yakawanda nzvimbo kumabhasikoro. Zvivakwa zvichiri kure nekukwana, asi guta riri kuvandudzika gore rega rega. Kuisa nzira dzekutenderera, kugadzira itsva yekupaka emabhasikoro, kuwedzera iyo 30km / h nzvimbo ... kwave kune zvakawanda zvirongwa, zvese zveveruzhinji uye zvakavanzika, kukurudzira vanhu veBrussels kuti vakwire pamabhasikoro avo.
Zviri kupesana neiyi yekumashure yekushanya iyo kushanya. Brussels yakoka vatatu vanozivikanwa vagari veguta kuti vatitungamirire pabhasikoro kukwira kuburikidza nenzvimbo dzavanofarira. Mugadziri wemafashoni uye aimbove mukwikwidzi weOlimpiki Olivia Borlée, director wefirimu Michaël R. Roskam uye muridzi weFuse nightclub Nick Ramoudt vanokwira mabhasikoro avo zuva rega rega muBrussels. Pasina kuzeza, vakabvuma kugovera rudo rwavo rweBrussels.